Ukuphuma ngebhayisikili - Izinzuzo ezinkulu ezisilethela zona | Bezzia
Izinzuzo zokuhamba ngebhayisikili
USusana godoy | 20/07/2021 16:00 | Ukuzivocavoca
Zonke izinhlobo zemidlalo zizosifaka emoyeni futhi ngenxa yalokho, zizosishiya nomqondo ocacile nomzimba ophile kahle futhi onempilo. Ngakho-ke, akukho okufana hamba ngebhayisikili, okungenye yezemidlalo evame kakhulu nokuthi izosishiya nezinzuzo ezinkulu okufanele wazi uma ungakakwenzi lokho.
Ngaphandle kokungabaza, manje ngesimo sezulu esihle ofuna ukuhamba ngaso, uma kungashisi kakhulu. Kepha sizokwenza lokhu kuhamba ngebhayisikili lethu ngoba kuzoba ngumngane wethu omkhulu. Ungaphuthelwa yikho konke engasenzela khona, ngoba akuyona into encane.
1 Ukuhamba ngebhayisikili kunciphisa ukucindezeleka
2 Ukhulisa umzimba
3 Uqinisa inhliziyo
4 Uzokwehla emzimbeni
5 Uzonciphisa i-cellulite
Ukuhamba ngebhayisikili kunciphisa ukucindezeleka
Kunezinkathi zonyaka lapho, phakathi kwekhaya nomsebenzi kanye nezinye izinkinga, senza ukucindezeleka okuningi. Ngakho-ke kwesinye isikhathi asazi nokuthi singayiqeda kanjani ezimpilweni zethu. Vele akulula ukuvalelisa, ngakho-ke ngomdlalo omncane mhlawumbe sizowusunduzela kude kakhulu. Ukuhamba ngebhayisikili kuzokwenza ukwazi ukusula ingqondo yakho ngaphezu komdlalo uqobo. ngoba uzobona izindawo ezintsha, umoya ovulekile futhi lokho kuzoholela ekutheni ungacabangi ngazo zonke izinkinga onazo kepha ugxile kokusemqoka ngalesi sikhathi. Uma uthola okuncane kwaleli vithamini nsuku zonke, khona-ke ngokushesha kunalokho ocabanga ukuthi uzoba ngcono kakhulu.
Kuyiqiniso ukuthi imisipha esizosebenza kakhulu kuzoba yi-quadriceps, ngakho-ke, futhi ingeyokuqala ukukhala. Noma singeke sikukhohlwe lokho nathi amathole kanjalo nezinqe ziyaqina. Esimele ukukulawula ukuma okuhle ukuze siqinise indawo engemuva. Ngendlela yokuthi indawo ye-lumbar ithathe izinzuzo ezinhle kakhulu, okwenza izinhlungu sezivele zikude kakhulu.
Okufanele sikwenze ukuqala kancane kancane bese sandisa amandla. Ngale ndlela, umzimba awuhlali umile futhi imiphumela siyibona ngokushesha ngangokunokwenzeka emzimbeni kepha nasempilweni yethu. Kulokhu, sikhuluma ngakho qinisa inhliziyoNjengakwi-pedaling, esizokwenza ukupompa igazi liye enhliziyweni ngendlela eqonde kakhulu, ezokhipha umoya wonke womzimba. Lapho sizobe siqinisa inhliziyo njengoba sifuna.
Njenganoma yimuphi umdlalo obiza usawoti wawo, i- ukuncipha komzimba kungenye yalezo zimo ezenzeka ngokushesha. Kepha kuyiqiniso ukuthi ngalokhu kufanele singaguquguquki futhi sihambisane nokuvivinya umzimba ngendlela efanele. Indawo elinganiselayo lapho sizobheja khona imifino, sizobeka eceleni ukudla okuphekwe kuqala noma okuthosiwe, kanye namakhekhe. Njengoba kuthiwa uma ulandela isigqi esimnene ebhayisikili ungalahlekelwa ngaphezu kwama-calories angama-500 njalo ngehora. Ngakho-ke, sekuvele kuyisikhuthazo esihle sokwehlela emsebenzini.
Ngenye inzuzo ebalulekile. Ngoba kunabantu abaningi ababona ukuthi i-cellulite ingena kanjani ezimpilweni zabo. Ikhasi eliwolintshi Kuthinta kakhulu indawo yemilenze nezinqe, yize kuyiqiniso ukuthi nayo ingasakazeka nakwezinye izindawo. Ukuphuma ngebhayisikili kuzonciphisa le nkinga, ngoba imilenze ihamba njalo futhi lokhu kubangela ukuthi kukhiqizwe umphumela wokusikhipha. Okusho ukuthi akukho ukuqoqwa kwamafutha emzimbeni. Uma usuvele wakuthanda ukuphuma nebhayisikili, manje uzolithanda nakakhulu, ngenxa yokwazi lezi zinzuzo ozozibona njengomphumela emzimbeni wakho. Ingabe usuvele uhamba ngebhayisikili nsuku zonke?
Indlela ephelele ye-athikili: Bezzia » Ezempilo » Ukuzivocavoca » Izinzuzo zokuhamba ngebhayisikili
Kuyini iBuffalo Hump nokuthi ungayiqeda kanjani
Ukubheja kwe-Amazon Prime kumnandi ku 'Cruel Summer'